Git Sangit News » सुत्ने कोठामा भुलेर पनि नराखौँ यस्ता चिज, अन्यथा जीवननै नर्क बन्न सक्छ ।
सुत्ने कोठामा भुलेर पनि नराखौँ यस्ता चिज, अन्यथा जीवननै नर्क बन्न सक्छ ।
सुत्ने कोठामा यी ६ कुराहरु भुलेर पनि नराख्नु होस : जसले गर्दा दाम्पत्य जीवननै नर्क बन्न सक्छ दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउनको लागी धेरै कुरामा ध्यन दिनुपर्छ । जसमध्ये सुत्ने कोठा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सुत्ने कोठमा यी ६ गल्तीहरु भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नुहोस् । यी गल्तीले त्यस कोठामा सुत्ने मानिसहरु बिच अविश्वास पैदा गरिदिन्छन् ।
१. घरमा आएका पाहुनाहरुलाई अतिथी गृह या ड्राईङ रुममा नै राख्नु पर्छ । सबै मानिसहरुलाई आफ्नो सुत्ने कोठमा ल्याउनु राम्रो हुदैन। यदि अरुलाई आफ्नो बेडमा सुताउनु भयो भने बेडबाट नेगेटीभ ईनर्जी आउँछ जसबाट पती पत्नीमा फाटो आउँछ ।२. प्राय मनिसहरुलाई आफ्नै कोठमा वास बेसीन लगाउन मन पर्छ । तर यस्तो गर्नाले पति पत्नीबिच विश्वास कम हुदै जाछ । यदि तपाईको कोठामा पनि वास बेसीन खुला छ भने त्यसलाई पर्दाले छोप्नुहोस् ।
३. सुत्ने कोठामा बेड देखिने गरि सिसा नलगाउनु होस् । यस्तो गर्नु निकै नराम्रो मानिन्छ । जसले गर्दा पति पत्नीबचिको शान्ती भंग हुन्छ ।४. सुत्ने कोठमाका कहिल्यै पनि काडेदार विरुवा वा फूलहरु नराख्नुहोस् । यदि राख्ने चाहना छ भने दुई ओटा गमला र त्यसमा सुन्दर फूलहरु राख्नुहोस् ।
५. बेडमुनी जुत्ता चप्पलहरु कहिल्यै पनि नराख्नुहोस् । यस्तो गर्नाले त्यो बेडमा सुत्नेहरुको दुर्भाग्य बढ्छ ।६. बेडमुनी राख्न नहुने अर्को कुरा हो बिजुलीका उपकारणहरु । यी सामानहरु कहिल्यै पनि बेडमुनी राख्नुहुदैन । यी सामानहरु बेडमुनी राख्नाले त्यो बेडमा सुत्नेहरुको झडगा भईरहन्छ ।
प्रकाशित मिति १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १६:५४